Bazoyibuka besemakhaya iDurban July
ABALANDELI bemicimbi ehambisana neVodacom Durban July (VDJ), bazoyibukela benethezeke emakhaya ngenxa yokuphazamiseka kwezinhlelo okudalwe ubhubhane iCovid-19. Isithombe: Motshwari Mofokeng/African News Agency(ANA)
ZANELE MTHETHWA | May 15, 2020
ABALANDELI bemicimbi ehambisana neVodacom Durban July (VDJ), bazoyibukela benethezeke emakhaya ngenxa yokuphazamiseka kwezinhlelo okudalwe ubhubhane iCovid-19.
UMnuz Phillip Sithole oyiPhini leMenenja yeTheku kwezokuThuthukiswa koMnotho, utshele Isolezwe ukuthi basemaphethelweni ezingxoxo nabanye abahleli beVDJ ukuthi yenziwe nge-internet.
Kuzobe kungokokuqala ukuthi lo mcimbi oheha izinkulungwane zezivakashi, ungenziwa bukhoma ezinkundleni zomjaho wamahhashi eGreyville, eThekwini.
“I-Covid1-19 isizumile sonke futhi ihambisana nezinselelo. Lokhu kusho ukuthi kumele sicabange ezinye izindlela ezintsha ukuze abantu bangayikhohlwa imicimbi yethu,” kuchaza uSithole.
Uthe iVDJ akuwona umcimbi omkhulu eThekwini kuphela kodwa nasezweni lonke. Ugcizelele nokuthi ngaphandle kwalo mcimbi, kukhona eminye eyimixhantela okumele iqhubeke. Ulinganise ngaleyo ebanjelwa ePeople’s Park nayo athe bayayifaka ezingxoxweni.
“Ngeke sivume kuthule cwaka ngoJulayi ekubeni kwaziwa ukuthi eThekwini kusuke kunecimbi eheha abantu. Ukwenza iVirtual VDJ kuyingxenye yamasu okubuyisa umnotho, esizosebenzisa ukumaketha imicimbi yeTheku,” kusho iphini lemenenja.
USithole uthe ngesonto eledlule bahlangane nabahleli beVDJ kanti basazohlangana okokugcina ukubheka ukuthi imicimbi izokwenziwa kanjani. Uthe bazohlela nosuku lokuyethula ngokusemthethweni ungakapheli uMeyi.
Ugcizelele ukuthi ezinye izinhlelo zizoncika ekutheni ngoJulayi izwe lizobe likusiphi isigaba sikathaqa. Uveze nokuthi kulezi zingxoxo abazishiyi ngaphandle ezinye izinhlaka eziba yingxenye yemicimbi kaJulayi, okubalwa abasiki bengqephu, osomabhizinisi nabaculi.
Uthe isivumelwano sabo nabahleli bemicimbi kaJulayi wukuthi akukho mali ezofakwa nakulabo abazonandisa ngoba yonke imikhakha ishayekile.Uveze nokuthi noMasipala awunayo imali yokwenza le micimbi kodwa okubalulekile ukuthi ingapheli emehlweni abantu. USithole uthe banesifiso sokuthola isiteshi sethelevishini esizoxhasa, okungenza kube lula ukuthi abantu bashaye imiswenko yabo emakhaya, babuke imicimbi.